U-Apple uphinde wayihlaziya umxholo womculo wasekhaya ngePodPod | Ndisuka mac
U-Apple uphinde wayihlaziya umxholo womculo wasekhaya ngePodPod yasekhaya
I-Apple ibuyela kwihlabathi lezithethi nge IPod Home, Ilandela le-iPod Hi-Fi yasentsomini, isithethi esiza silayishwe ziindaba kwaye zinxulumene iapile Izixhobo zeMculo kunye neApple ngokumangalisayo. Sisithethi esikwaziyo ukuvelisa iindawo ezahlukeneyo ngokulawula ulwalathiso lokukhupha amaza esandi, ngamafutshane, impumelelo entsha yeApple.
Ngokubhekisele kuyilo lwayo, sinokuthi iyafana kakhulu naleyo yeMac Pro kodwa ijikelezwe ngumnatha. Iya kuthengiswa ngemibala emibini, emnyama nomhlophe kwaye ngaphezulu inenxalenye eguqukayo apho ungawubona umfanekiso we-icon yomncedisi weSiri xa ushukuma.
Esi sithethi sitsha asinanto inye kwaye akukho nto ingaphantsi kwayo Izithethi ezisixhenxe zesithethi kunye ne-subwoofer enkulu ilawulwe yonke le nto yi-A8 chip eyenza ukuba ukulawulwa kwamaza alalelwayo kuyenze ikhetheke kwicandelo layo.
Inemakrofoni ezintandathu ezijikeleze yona ukubiza iSiri, ke amandla ayo kumncedisi webhendi lilonke. Ngoku ukudityaniswa okuninzi kunye neSiri kunoku-odolwa kwiPodPod yasekhaya kwaye yile nto kanye eyenza ukuba ikhetheke kangaka. I-HomePod inokusetyenziswa njengomncedisi wasekhaya Kwaye iya kuba nakho ukukuxelela iindaba, ukuba injani na i-traffic, iialamu, imiyalezo, njl. Kwaye ukuba unayo iKhayaKit, iPodPod iya kulawula ezo zixhobo.
Ixabiso layo lokuthengisa liya kuba ngama-349 eedolakwaye ziya kuthengiswa ngoDisemba eMelika, eUnited Kingdom nase-Australia. ISpain ihlala umthwalo wesibini wamazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » U-Apple uphinde wayihlaziya umxholo womculo wasekhaya ngePodPod yasekhaya
UCésar Vílchez sitsho
Ewe, njengoko kuvakala ngathi "kulungile" njenge-ipod HiFi, baya kuphumelela kunokuba bancinci!
Phendula uCésar Vílchez
Iposi entle kakhulu ... njengabo bonke abo ubapapashayo ... Siyavuyisana ....
I-Apple isungula izibhengezo ezimbini zePad Pro entsha